एक वर्षमा एक करोडभन्दा बढी मोबाइल आईएमईआई दर्ता
रञ्जनहरि कोइराला बुधवार, जेठ १०, २०७४ 8702 पटक पढिएको
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) दर्ता सुरु गरेको एक वर्ष पुग्दा एक करोडभन्दा बढी आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको छ । वैशाखबाट मोबाइलको आईएमईआई दर्ता सुरु गरेको प्राधिकरणमा व्यक्तिगत र व्यवसायी गरी एक करोड तीन लाख ९२ हजारभन्दा बढी आईएमईआई दर्ता भएको हो ।
गत वर्ष मात्र ९९ लाख ९८ हजार आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको छ । त्यसमा ९९ लाख ९५ हजार व्यावसायिक रूपमा र चार हजार व्यक्तिगत रूपमा आईएईआई नम्बर दर्ता भएको प्राधिकरणका सहायक निर्देशक दिनेश गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा तीन लाख ९४ हजारभन्दा बढी आईएमईआई नम्बर दर्ता भइसकेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमईआई) नम्बर दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको ६ महिनामा २५ लाख मोबाइल फोन प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन् । गौतमका अनुसार धेरैजसो मोबाइल सेटमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर हुने भएकाले दर्ता भएको आईएमईआई नम्बरभन्दा आधा संख्यामा मोबाइल आयात भएको छ । दर्ता भएको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ७० लाख मोबाइल व्यावसायिक रूपमा र दुई हजार दुई सय मोबाइल व्यक्तिगत रूपमा १३ महिनामा नेपालमा भित्रिएको छ ।
मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित गर्न साथै आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १ देखि आईएमईआई नम्बर दर्ता कडाइसाथ लागू गरेको थियो । यसलाई अझ प्रभावकारी र प्रयोगमैत्री बनाउनका लागि प्राधिकरणले अनलाइन सेवा पनि प्रदान गर्ने जनाएको थियो । तर, अनलाइन पक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अनलाइन प्रक्रिया अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पुगेको अवस्था छ ।
अनलाइनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पुगिसकेको र यो परीक्षणका क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । परीक्षणमा सफल भएपछि यो प्रयोगकर्तामाझ आउनेछ । आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न अनलाइन सेवा सुरु भएको खण्डमा दर्ताका लागि फाइल बोकेर धाइरहनुपर्दैन । अनलाइनमार्फत नै व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुबै दर्ता गर्न सकिनेछ भने काम छिटो हुनुका साथै सहज रूपमा तथ्यांक हासिल गर्न सकिनेछ ।
आईएमईआई दर्ता प्रक्रियालाई अनलाइनमा लानकै लागि प्राधिकरणले इक्विपमेन्ट आईडेन्टिटी रजिस्टर(ईआईआर) परामर्शदाता समेत नियुक्त गरिसकेको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार दुई महिना अघिबाट युकेको लौरेसिया एसोसिएसन कम्पनी परामर्श दाताका रूपमा नियुक्त भएको हो । उसले कार्यविधिको निर्धारण गर्नुका साथै यसको सञ्चालन कसले गर्ने भनी सुझावसमेत दिनेछ । यसका साथै टेलिकम सेवा प्रदायक (अपरेटर), भन्सार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र ग्राहकले के गर्ने भन्ने कुरासमेत परामर्शदाताले सुझाव दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यससँगै मोबाइल हराएको खण्डमा मोबाइल खोज्ने अवधिभर ग्रे को रूपमा राखी खोजी गर्न सकिने र नभेटिएको खण्डमा मोबाइल नै ब्लक गर्न सकिनेछ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोग आर्थिकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । जुन रूपले यसको प्रयोग भएको हो त्यहीअनुरूप समस्या पनि सिर्जना हुँदै गएको छ । यसले चोरी, ह्याकिङजस्ता समस्या देखा परेका छन् । यसले गर्दा पनि आईएमईआई दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने काम भएको हो । आईएमईआई दर्ताले भन्सार छलेर मोबाइल आयात हुने क्रम रोकिनुका साथै आईएमईआई दर्ता हुँदा मोबाइल हरायो भने खोज्न सहज हुनेछ । यसमार्फत चोरीको मोबाइल कुन ठाउँमा कुन सिम हालेर प्रयोग भइरहेको छ, पत्ता लगाउनसमेत सहज हुने खनाल बताउनुहुन्छ ।
को बन्ला मुख्यसचिव ? 10723
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 2936
जो कुकुर मर्दा १३ दिन किरिया बसिन् 15775
जनकपुरमा दीपावलीको भव्य तयारी 541
भारतबाट ल्याइएको दस लाखको पटाका नष्ट 902
कपास उद्योगमा आगलागी, १४ लाखको क्षति 772
डा. केसीले तोडे अनशन 3550
प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखको गाडीमाथि ढुंगा प्रहार 10057